Letter to The Editor » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဧပြီ ၂၀၁၆	111
kai says: Moethee Zun
မြစပဲရိုး says: အဟွတ် ၊ အဟွတ်၊ အဟွတ် ။ ရေတောင် သီး တယ် ကိုမိုးသီး ရယ်။
ရဲဘော်တို့ က ပါးစပ် က မချ သေးပါလား ကွယ်။ ပြန်ပါလေ။
မြစပဲရိုး says: နှစ်တွေပြောင်း၊ အခြေအနေတွေပြောင်း၊ နည်းပညာတွေပြောင်း၊ စနစ်တွေ ပြောင်းလဲ မပြောင်းနိုင်ကြဘဲ
kai says: Los Angeles ThinGyan 4/17/16
kai says: Fidel Castro Gives Rare Speech Saying He Will Soon Die
kai says: ‎
kai says: China’s Xi Jinping takes commander in chief military title
From the section China China’s President Xi Jinping has taken onanew military title, in his latest move to exert greater control over the armed forces.
kai says: မြန်မာပြည်က.. တရုတ်ပြေးမင်းက.. မွန်ဂိုတာတာတွေပုဂံကိုဝင်တိုက်လို့.. ပြေးရတဲ့နရသီဟပတေ့မင်းကိုခေါ်တာ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သေချာနေတာက.. တရုတ်ဆိုတာက.. ကုလားကိုခေါ်တဲ့အမည်ပဲ..လို့စ်…။ =
kai says: Wira Thu added 17 new photos to the album: “အမျိုးသားပညာရေးကျောင်းတော်ကြီး”.
kai says: ဒီထက်ဆိုးတာတွေလာလိမ့်မယ်..။
ခုတော့.. အဲဒီကျောင်းထွက်တွေ.. ပညာပြတာ.. နောက်အနှစ်၅၀ ခံကြပေတော့ခံပေတော့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည် ၁ သိန်းကျော် ပြန်ပို့ရန် ပြင်ဆင်